လိင်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား - ပြိုင်ဆိုင်သောအာရုံကြောများအကြားငြင်းခုံမှု (၂၀၁၁၊ နောက်ဆုံးစာရင်းပြုစုထားသောစာရင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
လိင်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား - ပြိုင်ဆိုင်သောအာရုံကြောများအကြားငြင်းခုန်မှု (၂၀၁၁၊ နောက်ဆုံးသတင်းများစာရင်း)
ဒီ post ကငျြ့တရားအကြောင်း, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး အထူးသဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအစီအစဉ်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏အတွင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို၎င်း၊ သင်၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေသင်သို့မဟုတ်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများသည်မကြာခဏချိုးဖောက်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ပါကဆက်ဖတ်ပါ။
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများအပါအ ၀ င်) သည် ဦး နှောက်တွင်ရှိသော“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအသိစိတ်” ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ သူတို့ကလွှမ်းမိုးစေတဲ့ ဦး နှောက်ယန္တရားကိုအားကိုးတယ် အားလုံး ရွေးချယ်မှုများ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ။
“ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များ လူသားမြားသညျငွေကြေးနှင့်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးသာမန်ရွေးချယ်မှုများတွင်အသုံးပြုသူတို့အားကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ဆားကစ်ကို အသုံးပြု. ခက်ခဲကိုယ်ကျင့်တရားဆုံးဖြတ်ချက်များစေနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အခြားတိရိစ္ဆာန်များတွင်လည်းတွေ့ရသောထိုဆားကစ်များသည်အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ကိုအတူတကွစုစည်းထားသည် - ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာများသည်မည်မျှကောင်းသည်၊ ဆိုးသနည်း။ လူတစ် ဦး ၏ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ”
သူတို့လေ့လာခဲ့သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအားလုံးသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ventral striatum, insula နှင့် vmPFC (pre-front cortex) ။
ဒီတော့ပြwhereနာကဘယ်မှာလဲ။ ပြနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇတွေမှာအစီအစဉ်များရှိသည်။ အစားအစာနှင့်အရင်းအမြစ်များသည်၎င်းတို့အားရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်၊ သို့သော်အခွင့်အလမ်းကောင်းများမှာအန္တရာယ်များမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ ကရင်အိုဝင်၏အပြုအမူ၊ သို့မဟုတ်ဘီလ်ကလင်တန်၊ မာ့ခ်ဆန်ဖော့ဒ်နှင့်ဂျွန်အက်ဒွပ်စ်များ၊ လာရီခရက်ဂ်၏ရေချိုးခန်းလှောင်ပြောင်သရော်မှုများနှင့်ဂျော့ခ်ျရီကာ၏“ ငှားသောကောင်လေး” ခေါင်းစီးများအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အသက် ၃၀ နှစ်အောက်လိင်တူချစ်သူတွေထဲမှာအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုဟာဒီထက်ပိုပြီးခုန်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပါ သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် 2001 ကတည်းက။
ဒီလူတွေထဲမှာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် - သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကသံလိုက်အိမ်မြှောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ Self-image နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦး နှောက်ရဲ့ ဦး နှောက်ယန္တရားကသူတို့ရဲ့အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို - ယုံကြည်တယ်၊ မ - မျိုးဗီဇဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ “တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဗီဇ" တကယ်ပါပဲ!
ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇအစီအစဉ်များကကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးများကိုမည်သို့ဆွဲသနည်း။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ် circuit တွင် dopamine အပို (“ gotta get it” neurochemical) ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမရေမတွက်နိုင်အောင်များစွာသော၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေချိန်မှာဒီဆားကစ်ကနေ input ကိုအားကိုးလေ့ရှိတယ်။ dopamine ပိုများလာရင်ကျနော်တို့့ကိုသွားတွေ့တယ် သိ ကျနော်တို့ကဒီတွန်းအားအပေါ်ပြုမူခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့, ပိုပြီးသမ္မာသတိရှိကြလော့အတွေးများကိုတက်ကြွစွာခုခံတွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Eh ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်? အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ dopamine (sensitivity) ပြုတ်ကျသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပျင်းလာနိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး) ကိုပိုမလိုချင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ထူးထူးခြားခြားမြင့်သည်ဖြစ်စေနိမ့်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသေးငယ်သောခရီးစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရက်နာမှုအနည်းငယ်ရရှိကြသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအလေးသာမှုတွေကိုဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Impulses သတင်းပို့မတိုင်မီသို့မဟုတ် ပြီးနောက် ကျနော်တို့ပြုမူ-နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားယေဘုယျအားဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိ။
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည် ဦး နှောက်နှင့်အတူကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိလာကြပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအသစ်အဆန်းများကိုအလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သံလိုက်အိမ်မြှောင်များကိုပျက်စီးစေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အခြေအနေတစ်ခုတွင်သံလိုက်အိမ်မြှောင်၏ချွတ်ယွင်းမှု (ဆိုလိုသည်မှာ limbic ton ၏ပုံပျက်ခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် - အလွန်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှု၌ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်အခြားမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအစီအစဉ်များသည်အချိန်အတန်ကြာစတင်ခြင်း - မူးရူးအစီအစဉ်ကို.
မင်းကအွန်လိုင်းပေါ်ကစကားပြောခန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ် titty bar တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုပါစို့။ ထိုအလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်အားလုံးဝန်းရံထားသည့်သင့် ဦး နှောက်သည်သင်၏အမြင်များကိုအရောင်တင်ခြင်းနှင့်အချိန်ကာလအတွက်သင်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအရောင်တင်ခြင်း၊ အမှန်တကယ်တွင်၊ ဝတ္ထုများ၊ ပူပြင်းသည့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်ပေးသောအမှိုက်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုရန်ယနေ့အခွင့်အလမ်းများသည် ဦး နှောက်များစွာအတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောကြောင့်သူတို့သည်အလိုအလျှောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ sensitivity ကိုဖိနှိပ် ပိုပြီး၎င်း၏ Goodies ရှာကြံသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ အဲဒီအစား သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကျေနပ်မှု feeling ၏ (သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် reboot မဟုတ်လျှင်နှင့်သည်အထိ), ထိုကဲ့သို့သောရှေးရှေးမကြာခဏကြီးထွားလာအကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်ခံစားရသည်။
ဤရွေ့ကား, သိမ်မွေ့, ဒါပေမယ့်အလွန်ကိုမှန်ကန်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသတိအသိပညာမပါဘဲပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ equilibrium နှင့်အသံကတရားသဖြင့်စီရင် restore လုပ်ဖို့, သူတို့ကအချိန်လိုအပ်ပါတယ် ပြင်းထန်သောဆွခြင်းမရှိဘဲ, (သို့သော်များ၏ပိုကောင်း, စာရေး ချစ်ခင်ခြင်း သို့မဟုတ်ဖော်ရွေအပြန်အလှန်) ။ သူတို့ပုံမှန်ပြန်မရောက်မချင်းချစ်သူတစ်ယောက်တောင်မှကြည့်ကောင်းကြည့်နိုင်သည်။ချည်း။ သစ်တစ်ခုဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ပူလိင်အများကြီးပြီးနောက်တယောက်သောသူက,
တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်ဘူး။ သူမသည်ကောင်းသောမိန်းမဖြစ်သည်။ သူမကိုငါကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဓာတုဗေဒပညာရပ်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ၊ လျစ်လျူရှုဖို့ခဲယဉ်းသည်။
မိမိအဆုလာဘ် circuitry အဆိုပါ overvaluing ဖြစ်ပါတယ် ကတိ dopamine အလွန်အတွေးမှာမိမိထုံဦးနှောက်ထဲမှာတက်လာခြင်းကြောင့် (အသစ်အဆန်းမှတဆင့်) ပြင်းထန်သောဆွ၏။ သူကပြုမူရန်အညစ်လိုအပ်ခံစားရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာအရာ: သူ့တပ်မက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်များကိုမ မိမိအကျင့်စာရိတ္တနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိတယ်။ ဒီမှာတရားခံ limbic သေံဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပconflictိပက္ခနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသံသယများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစာလုံးပေါင်းအောက်ရောက်နေမှန်းမသိဘဲပြုမူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒပြောင်းလဲသွားသောအခါ“ ငါဘာတွေတွေးနေခဲ့မိပြီလဲ” ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသည်။ အဖြေ: ငါတို့မဟုတ်ဘူး ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ autopilot တွင်ရှိကြသည်။ အနည်းဆုံးတော့မစဉ်းစားမဆင်ခြင်တတ်သောအပြုအမူကိုကျိုးကြောင်းညီညွတ်စေသည့်ပုံပျက်အမြင်ဖြင့်ခံစားနေရသည်။
တစ်ကိုယ်တော် porn အသုံးပြုသူများအကြားအလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်အမြင်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်းဤဖလှယ်မှုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (ဤတွင်ပါသောပြTheနာသည်ညစ်ညမ်းသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ထင်မြင်ချက်အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းပြီးနောက်အလွန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ )
ပထမလူ: လိင်ကိစ္စသည်သင့်အားလိင်ဆက်ဆံသင့်သည်ဟုမသတ်မှတ်နိုင်သည့်ပြင်ပတွင်ရှိသည်။ အခြားသူများကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ ပြုမူဆက်ဆံခြင်းသည်အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင်သင့်အား“ အရာအားလုံးသွား” သည့်နေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အမှန်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာနည်းလေ၊ သငျသညျအပြည့်အဝစွဲသည့်အခါသင်နီးပါးဘာမှမမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်မြင်နိုင်ပါသည်။ ငရဲ၊ ငါဆီးသွားတာ၊ အော့အန်တာ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းတာ၊ မသန်စွမ်းသူတွေဟာအရှက်ခွဲခံရပြီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာကိုပျော်ရွှင်စွာကြည့်နေတယ်၊ ​​အမှိုက်သရိုက်တွေတောင်မှသူတို့ကိုတောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ငါဂရုမစိုက် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာအဲဒီ“ အာကာသ” ထဲမှာရှိတုန်းကဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ဒါနဲ့လပေါင်းများစွာကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုနှိပ်လိုက်ပြီး၊ “ ငါဘာတွေမြင်နေရတယ်ဆိုတာငါမြင်နေရတာလဲ” ဟူသောကြောက်မက်ဖွယ်ခံစားချက်ကိုရလိုက်သည်။ ငါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်စိတ်ကောင်းသောမျက်စိဖြင့်မြင်သည်။ Porn ကငါကြိုက်နှစ်သက်သောလိင်အမျိုးအစားအကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုနေရာ၌ရှိစဉ်ပြင်းထန်သော၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အရာများကိုမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာလူတစ်ဦးအချိန်ကုန်လွန်သွားပြီးနောက်မှမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်လာ, "ဤသူသည်ငါသာဖြစ်ပါသည်, ငါထင်။ " ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူအသစ်များကိုလမ်းပေါ်သို့လှည့်လာစေမည့်အကြောင်းသတိပေးခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှသာသူတို့ဘယ်လိုသဘောသဘာဝလဲဆိုတာကိုမသိဘဲနားလည်လာလိမ့်မည်။ သူတို့၏အမြင်တွင်အော့အန်နေသောနှင့်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသောလူတစ် ဦး ကိုချန်ထားခြင်းသည်ပြင်းထန်သောမှိုခရီးစဉ်ထက်လူတို့၏စိတ်ကို ပို၍ ထိမိနိုင်သည်။ ရိုးသားတဲ့လူတွေဟာသူတို့မြင်တဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားပြီးမှဘဝဟာညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ လူများသည်သူတို့၏နံရံများကိုထိမှန်သောအခါသူတို့လည်းနောက်သို့လှည့်ကာ“ ငါဘာဖြစ်လာပြီလဲ” ဟုမေးလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိဖို့ကြိုးစားတယ်။ ငါတို့ဘယ်လောက်အထိလမ်းလွဲသွားသည်ကိုငါတို့သိသောအခါမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမှထွက်ခွာသောအခါကျွန်ုပ်တို့တိုက်ခိုက်နေသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည်စက်ရုပ်များကဲ့သို့ပြုမူရန်မျှော်လင့်သောကမ္ဘာကြီးတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မှော်အတတ်၏အတွေ့အကြုံအစစ်အမှန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်လူတို့စွန့်ခွာသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားလူတိုင်းအတွက်သင်ဟာလူအုပ်ကြီးထဲမှာနာမည်မရှိတဲ့မျက်နှာတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာကမ္ဘာကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးသူတစ် ဦး အတွက်ပါပဲ။ ရွေးချယ်မှုကရှင်းပါတယ်
ဟုတ်တယ်၊ ဦး နှောက်ရဲ့ dopamine တုံ့ပြန်မှုကိုပုံမှန်ပြန်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါရွေးချယ်မှုကရှင်းနေတယ်။
ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ပြင်ပကငျြ့တရား မဖြစ် မည်သူမဆို၏လိင်ရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေခံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအသိသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်နှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က“ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်” သို့မဟုတ်“ မသင့်လျော်သော” နှင့်“ လူမဆန်ခြင်း” သို့မဟုတ်“ လူမဆန်တဲ့သူ” များအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော“ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်း” သို့မဟုတ်“ အကျိုးမရှိခြင်း” ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါကြောင့်အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလက်သေတ္တာကိုခေတ္တခဏဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါငါတို့အတွက်နောင်တရစရာရွေးချယ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောသကဲ့သို့
အကြှနျုပျ၏အပျော်အပါးစင်တာလုံးဝလွှဲပြောင်းယူ။ ဦး နှောက်၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအပိုင်းကိုဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပြီးအရာများနှင့်ဆက်လုပ်ရန်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လိုအပ်သည်။ ငါ၌လူနှစ် ဦး နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
dopamine မညီမျှမှုနှင့်ရုန်းကန်နေရသော ဦး နှောက်များမှပြင်ပကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအလွယ်တကူလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဦး နှောက်ဟာမျှတမှုရှိရင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး လိုအပ်ချက် အတုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို-ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ရှင်းလင်းစွာစဉ်းစားနေသည်။ ဤတွင်အစွန်းရောက်ဆွအပေါ်ပြန်ဖြတ်ကြသူငါးယောက်တို့၏မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
အဲဒီမှာခြားနားချက်၏မည်မျှအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါဟာအရာအားလုံးထက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်၊ ပိုပြီးကိုက်ညီမှုရှိတယ်၊ ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ငါ၏အစစ်မှန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထွက်လာနိုင်ပါတယ်တူသောဒါဟာခံစားရပါတယ်။
ကျွန်မပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်နှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ငါ့အာရုံကြာရှည်ခံသည်။ ငါအချိန်တိုးချဲ့ကာလအဘို့, မှတဆင့်အတိုင်းလိုက်နာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်တစ်တန်းထဲမှာပင်မျိုးစုံသောအရာတို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ တောင်မှငါ့အသူဌေးကငါထိန်းချုပ်ပိုပြီးပုံပေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ငါပိုပြီးပုလ်ခံစားရတယ်, ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုပိုမိုတည်ငြိမ်ပိုမိုအသက်ရှင်တော်မူသည်နှင့်အကျိုးဆက်တစ်ခုလိုက်တယ်လမ်းအတွက်ပိုမို '' virile '' ... ? ငါဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး ဒါဟာအံ့သြစရာခံစားရသည်။
ငါရှင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်, ပိုကောင်းတဲ့လူမှုရေး interaction ကပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု, ပိုပြီးစွမ်းအင်နှင့်ထို့ထက် ပို. တပြင်လုံးကိုကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာအလွန်လျင်မြန်စွာရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကပို grounded နှင့်ပိုပြီးညွှန်ကြားခံစားရပိုပြီးလူတွေကိုပေးဖို့ပိုရှိသည်။ ငါသည်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူဖြုန်းအဆိုပါကြိမ်, ငါသည်အပြည့်အဝပျော်ရွှင်ခံစားကြရသည်။
သူတို့အစွန်းရောက်, neurochemically-generated ဖိအားအောက်တွင်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရား codes တွေကိုချိုးဖောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကမကောင်းတဲ့လူတွေမရှိကြပေ။ အတော်များများကရိုးရှင်းစွာရန်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ equilibrium restoreဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သံလိုက်အိမ်မြှောင်တစ်ဖန်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးများနှင့်အတူ align ။ ဤသည် recalibration ရက်သတ္တပတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်မျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းသည် (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်) ။ ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ၀ တ်ပြုခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ရက်ရောခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုဂရုတစိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစသည့် ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီစေသည့်နည်းစနစ်များကိုအာရုံပြုခြင်းသည်ကမ္ဘာ့ ၀ ိညာဉ်ရေးရာဓလေ့ထုံးစံများစွာဖြစ်သည်။ အဲဒီစာရင်းကိုထည့်ပါ နေ့စဉ် non-ရည်မှန်းချက်-oriented ချစ်ခင်။ ထိုသို့သော tools တွေကိုကျနော်တို့တကယ်နေသောနှင့်အတူ aligned ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုစောင့်ရှောက်မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်။
အပ်ဒိတ်: အဆိုပါ dopaminergic midbrain drive ကိုအပြုအမူဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအတွက် Endogenous အတက်အကျ
လူသားများသည်သူတို့၏အပြုအမူတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တသမတ်တည်းမရှိခြင်းသည်တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ... ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ dopaminergic midbrain ထဲမှာပင်ကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုကအန္တရာယ်များပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောရွေးချယ်မှုများအကြားကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပုံအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ကြောင်းပြသသည်။ ... ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်ကိုသိသောသိစိတ်သည်ရှုပ်ထွေးသောလူ့အပြုအမူအမျိုးမျိုးအတွက်ဇီဝကမ္မအခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးသောအတွင်းပိုင်း ဦး နှောက်အခြေအနေများအတက်အကျကြောင့်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသသည်။
သုတေသီများသည်ပြproblemနာအမျိုးမျိုးရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများကိုကြည့်ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုသုံးခြင်းသည်မက်ခီယာဗယ်လီယန်၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဝါဒ၊ မှ“တိကျသောအွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့မှောင်မိုက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ "
ဒါကလူတို့သညျအဘို့အဖွင့်ထားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့် Narcissistic နှင့် Histrionic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorder စရိုက်လက္ခဏာအဆိုပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှု
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းတို့ကိုတစ် ဦး ချင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏မှောင်မိုက်သော triad နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမသန်မစွမ်းမှုဆိုင်ရာတိကျသောပုံစံများအကြားဆက်နွယ်မှုများနှင့် အဆိုပါအမှောင် Triad နှင့် psychopathy အကြားဆက်ဆံရေး, sociosexuality နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြထဲမှာကျားမများ၏အခန်းကဏ္ဍ
[အချို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများအပြင်၊ porn နှင့် online လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သောယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည် ပို၍ အာရုံကြောဆိုင်ရာ၊ နှစ်သက်လက်ခံမှုနည်းသော၊ narcissist ပိုများသော၊
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုတစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ အတူတကွကြည့်ခြင်း - Romantic Relationship အရည်အသွေးနှင့်အတူ longitudinal Association များ
[porn] တစ် ဦး တည်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အတူတကွကြည့်ခြင်းတို့သည်နှစ် ဦး စလုံးသည်မိတ်ဖက်များအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကျားမကွဲပြားမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ …
လောင်ဂျီတွဒ်အသင်းအဖွဲ့များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းသည်အချို့သောစုံတွဲများအတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်ရင်ဖြစ်စေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုတိုးပွားစေသည်ဟုအကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အတူတကွကြည့်ရှုခြင်းအဆင့်အတန်းသည်ကျားမခွဲခြားဘဲကာယပိုင်းအရကျူးလွန်ခံရခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်သည်နေ့စဉ်ဘဝ၏နေရာအနှံ့တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများမဖြစ်လာမီဤအချက်အလက်များကို ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၁၀ အကြားတွင်စုဆောင်းခဲ့သည်။
စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ပြproblemsနာများကိုစာရင်းပြုစုပြီးနောက်ရလဒ်များသည် [ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု] နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ [မိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှု] ကျူးလွန်ခြင်းတို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ဆိုက်ဘာဆိုးသွမ်းအတွက်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု (2017) မှဦးစီးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင် သာ. ကွီးမွတျမှ exposure
လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်ရလဒ် ၁။ ပိုမိုနှောင့်နှေးသောလျှော့စျေးလျှော့ချခြင်း (ဖြည့်ဆည်းမှုကိုမနှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း)၊ ၂) ဆိုက်ဘာမှားယွင်းမှုများတွင်ပါ ၀ င်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အတူတူယူခြင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအချို့သောအလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များကိုလျှော့ချနိုင်သည် (ချုပ်တည်းခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကောက်နှုတ်ချက် -
ဤတွေ့ရှိချက်များကဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများတွင်အမျိုးသားများပါ ၀ င်မှုကိုလျှော့ချရန်မဟာဗျူဟာတစ်ခုအားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှောင့်နှေးနေသောဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။ လက်ရှိရလဒ်များအရဆိုက်ဘာအာကာသအတွင်းလိင်လှုံ့ဆော်မှုများမြင့်မားမှုသည်ယခင်ထင်ထားသည့်အမျိုးသားများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်သည့်အပြုအမူများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
ဤရလဒ်သည်အရေးကြီးသောလက်တွေ့ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အနာဂတ်ကိုလျှော့ချခြင်းတို့သည်အမျိုးသားများကြားရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ စေ့စပ်ဖျန်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်များ၌အမျိုးသားများသည် 'အမြင်အာရုံချို့တဲ့သော' အမျိုးသားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကာလတိုအကျိုးအမြတ်အတွက်ကာလရှည်အကျိုးအမြတ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
sexy အမြိုးသမီးမြား၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအမျိုးသားများတွင်အနိမ့် Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ပြည်နယ်မှဦးဆောင်
ဝက် ၀ တ်စားဆင်ယင်အမျိုးသမီးများနှင့်စီးပွားရေးအပြုအမူများ
အမျိုးသားများသည်ဝက် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောအမျိုးသမီးများ၏ပုံများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအန္တရာယ်များသည်။
မှန်ကန်သောပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုပြုလုပ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်းသည်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းကိုအားပေးသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ကိုယ်တိုင်တင်ဆက်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်
သိပ္ပံ Away Porn မှစ. နေပါမှနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းကမ်းလှမ်း
Dopamine လူသားတွေဟာခုနှစ်တွင်သာတူညီမျှအပြုအမူ modulates
ဖော်ထုတ်မြင့်မားသောစိုးရိမ်ပူပန်သွေးဆောင်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဦးနှောက် circuit ကို
ရုပ်ပုံသည်သင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာများကိုမည်သို့ဖျက်စီးသနည်း - ၎င်းကိုသင်မကြည့်လျှင်ပင်
ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (2008) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့
Erotica အသုံးပြုသူများကအချိုးအစားမမျှအထီးခဲ့ကြသည်, လိင်-related ဆောက်လုပ်ရေးအတော်ကြာ psychometric အစီအမံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူနှင့် Non-အသုံးပြုသူများကိုပြုလေ၏ erotica ထက်ပိုက်ဆံ task အတွက်ဝနှောင့်နှေးပိုမိုထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုပုံစံများပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဝဖြစ်စဉ်များအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားရလဒ်များမှယဘေုယကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Intertemporal ရွေးချယ်မှုအတွက်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပယောဂ Generalized စိတျမရှညျ
ကျနော်တို့ sexy တွေကိုထိတွေ့ငွေကြေးဆုလာဘ်များအကြား intertemporal ရွေးချယ်မှုအတွက်ပိုပြီးစိတ်မရှည်စေပါတယ်ဖော်ပြသည်။ အထွေထွေဆုလာဘ် circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြ, ကျွန်တော်တစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအကျိုးသက်ရောက်မှု nonmonetary ဆုလာဘ်မှ generalizes အကြောင်း, လိင်တွေကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ် satiation အကျိုးသက်ရောက်မှု attenuates ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
လူ့ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်တွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု (2017)
(ဤလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ခဲ့သည်။ ) ပျက်စီးခြင်းအတွက်အစာစားချင်စိတ် - လူတို့၏အစားအစာရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမျက်နှာများ၏အတိုက်အခံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ဆွဲဆောင်မှု ( vs. ဆွဲဆောင်မှုမရှိ) ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်မျက်နှာများထိတွေ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
လောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသမိုင်းကြောင်းရှိသူများတွင်စွဲခြင်းနှင့်“ ကိုယ်ကျင့်တရား” ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုလိုငွေပြမှုများ (နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်တည်ဆောက်ပုံပြောင်းလဲမှုများ) အကြားဆက်နွယ်မှုများပေါ်ထွက်လာသည်။
လူငယ်များနှင့်လောင်းကစားခြင်းရောဂါ - ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဆင့်မြင့်လာခြင်း၊ အစောပိုင်း GD စတင်ခြင်း၊ GD ကြာရှည်ခြင်းနှင့် GD ပြင်းထန်မှုပြင်းထန်ခြင်းတို့သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများရှိနေခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားအပြောင်းအလဲကာလအတွင်းအကျဉ်းထောင်လှုံ့ဆော်အသုံးပြုသူများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သော fronto-limbic ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
ဤရလဒ်သည်ဗဟိုစိတ်ရင်းနှင့်ဇီဝကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်စဉ်များသီအိုရီ၏သိမြင်ပေါင်းစည်းမှုဒြပ်စင်အတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်အတူလှုံ့ဆော်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သော fronto-limbic ကိုယ်ကျင့်တရားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ပြောင်းလဲနေသောပုံစံကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လှုံ့ဆော်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း Fronto-limbic ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (အယ်ဒီတာ)
လေ့လာရေး Porn အသုံးပြုသူများ (2016) တွင်စက်လှေကား (နှင့်လေ့) ကိုရှာပါ
သုတေသီများကငျြ့တရား (2019) ကိုနားလည်ရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောသော့ချက်ဖြစ်မဖြစ်နိုင် testosterone ဟော်မုန်းလို့ပြော (ငါတို့ပိုပြီးသဘောမတူနိုင်ဘူး။ )